Kpakpando ndị dị na mbara igwe: mụta maka ha | Netwọk Mgbasa Ozi
A haziri kpakpando ndị dị n’eluigwe n’abalị. Fọdụ na-ele anya ibu karịa ma ụfọdụ na-adịkarị ntakịrị maka ebumnuche dị iche iche. Otu bu kpakpando n’onwe ya ma nke ozo bu uzo di n’etiti kpakpando ahu na uwa anyi. Ihe a na-eche n'echiche bụ na e nwere akara ngosipụta n'echiche nke na-esonye na kpakpando na nke anyị na-akpọ kpakpando. Kpakpando nwere otu uru ha barala kemgbe ụwa. Lee anyị ga-agwa gị karịa gbasara kpakpando na ịkpọ ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị mkpa.
Want chọrọ ịmụba ihe ọmụma gị banyere mbara igwe na ịmatakwu banyere kpakpando? Lee, anyị na-agwa gị.
1 Igwe kpakpando na mbara igwe n'abali
2 Ịba uru
3 Kpakpando taa
4 Elfọdụ ìgwè kpakpando ndị ka mkpa
4.1 Akwa agba
4.2 Obere agba
Igwe kpakpando na mbara igwe n'abali
Igwe kpakpando abughi ihe ozo kariri otu kpakpando nke, kpam kpam myiyi udi, ha na-iche site na ịlụ nke e. Ọ dị ka a ga - asị na anyị sonyere ntụpọ iji mee ya. Aha nke kpakpando a sitere na akụkọ ifo, anụmanụ, ndị rụworo nnukwu ọrụ maka mmadụ ma ọ bụ ọbụlagodi ihe ndị dị mkpa.
Ha na-aha site na aha ndị kwesịrị ekwesị sitere na Latin, Greek na Arabic. Aha a na - enwekarị mkpụrụedemede Greek pere mpe na - amalite na mkpụrụedemede na mkpụrụedemede ndị ọzọ na - agbadata n’usoro. Wayzọ a, ị na-enye ya ntakịrị nke nchọpụta naanị site n'ịgụ aha ahụ. N’akụkụ akwụkwọ ozi mkpụrụ akwụkwọ Grik, anyị na-ahụ ndebiri nke aha kpakpando ahụ.
Ọ bụrụ na anyị kpochapụrụ mkpụrụedemede Grik maka ọnụ ọgụgụ nke ìgwè kpakpando, anyị na-eji mkpụrụedemede Latin eme ihe. Typedị nomenclature a a maara ya dị ka nke Bayer. Akara kpakpando pere mpe nwere aha na-esochi mkpirisi aha ya bụ Flamsteed. Dika otutu nomenclatures, kpakpando nwere ike inwe aha di iche iche n ’uwa nile.
Ọ bụghị naanị na anyị nwere ike ịchọta otu kpakpando nwere aha dị iche iche, mana a na-akpọkwa otu kpakpando ndị mejupụtara kpakpando dị iche iche.
N’oge ochie, kpakpando nile bụ nnukwu ịba uru iji mụta ịnyagharịa n'abalị. Na-enweghị igodo GPS ma ọ bụ rada nke ụdị ọ bụla, ịgagharị n'oké osimiri dị n'okpuru ụdị "teknụzụ" ndị ọzọ. Na nke a, ụyọkọ kpakpando ndị ahụ rụrụ ọrụ dị ka ntụaka iji gosi ụzọ ha dị.
Ha rụkwara ọrụ ka ha nwee ike ịkọ maka ebe ndị ọdụ ụgbọelu si gafee. Na mgbakwunye na ihu igwe, a naghị akọwapụta ọdụ ụgbọ ndị ahụ nke ọma. Ya mere, site na ngagharị nke kpakpando ndị ahụ, ọ ga-ekwe omume inwe ọnọdụ nke thewa nwere maka Sun na Sun Usoro anyanwụ marakwa oge oge n'afọ ha bụ.
Ka ọ dị ugbu a, naanị otu ụyọkọ kpakpando nwere iji mee ka ọnọdụ kpakpando dịkwuo mfe. Anyị ga-eburu n’uche na anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ nde kpakpando na mbara igwe ma na, ka nkeji na awa na-aga, ha na-agagharị n’ihi mmegharị nke ntụgharị ụwa.
Na ngụkọta anyị na-ahụ ìgwè 88 nke kpakpando na mbara igwe anyị. Onye ọ bụla n’ime ha na-ewere ụdị onye dị iche na aha ya, ma ọ̀ bụ nke okpukpe ma ọ bụ n’akụkọ ifo. Ihe osise kachasị ochie nke anyị nwere n'oge gara aga tupu 4.000 BC N'oge ahụ, ndị Sumer kpọrọ aha kpakpando ndị dị mkpa dị ka Aquarius, iji kwanyere chi ha ùgwù.
Kpakpando ndị a “rụrụ ọrụ” taa n’ebe ugwu ụwa adịghị iche na ndị Ijipt oge ochie. Fọdụ ụyọkọ kpakpando ndị dị mkpa bụ nke Homer na Hesiod. Ptolemy bụ mgbakọ na mwepụ na onye na-enyocha mbara igwe ma nwee ike ịchọpụta ụyọkọ kpakpando iri anọ na asatọ ndị anyị nwere taa. N'ime ìgwè kpakpando 48 ndị ahụ ọ chọtara, 48 n'ime ha ka nwere otu aha.
Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ma mara bụ ndị nọ n'ụgbọelu nke ụwa. Ha bụ kpakpando nke zodiac. Ha metụtara akara zodiac nke onye ọ bụla. Nke a metụtara ọnwa amụrụ nke ọ bụla n'ime afọ.
E nwekwara ndị ọzọ a maara nke ọma dịka Nnukwu Dipper nke a pụrụ ịhụ site n'akụkụ ugwu na Hydra. Nke ikpeazu bu otu kpakpando kacha ibu nke di na mbara igwe nke elu igwe. Ọ bụ nchịkọta nke kpakpando iri isii na asatọ nwere ike iji anya ha hụ. Ihe na-abụghị ya bụ Cruz del Sur, nke bụ kpakpando na ntakịrị ntakịrị dị.
Elfọdụ ìgwè kpakpando ndị ka mkpa
Kpakpando dị iche iche dị mkpa dabere na mpaghara ụwa anyị nọ. Iji maa atụ, n’ebe ugwu ụwa, The Big Dipper bụ otu n'ime kpakpando kachasị mkpa. Otú ọ dị, ọ bụghị n'ebe ndịda ala. Nke a bụ n'ihi na anaghị ahụ ya ebe ahụ, ya mere na ọ nweghị ike ịdị mkpa. Ka anyị ghara ichefu na ọ bụghị kpakpando niile ga-ahụ site na otu isi na Earthwa, mana ọ dabere n'ọtụtụ ebe anyị nọ. Ihe yiri nke ahụ na-eme polar aurora.
Lee, anyị ga - egosi gị ụfọdụ ndị ama ama ama dị mfe nghọta na - akpọ ìgwè kpakpando.
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa na mara. Ọ na-eje ozi akara ebe ugwu. Ndị na-akwọ ụgbọ mmiri oge ochie jiri ya mee akara maka ụzọ a na-amaghị ala.
Ọ bụ ìgwè kpakpando ọzọ nke a pụrụ ịhụ naanị n'akụkụ ugwu. Agbanyeghị, ọ dị ezigbo mkpa n'oge ochie maka ndị ọkwọ ụgbọ mmiri ebe ọ bụ na ị nwere ike ịmata oge nke afọ na oge na-ejighị ụdị kalenda ọ bụla.
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ama na nke kachasị mma. Ejikwa aha dinta mara ya. Ọ na-anọchite anya ọdịbendị ụfọdụ ma ọ bụ ihe dị nsọ nye ndị Ijipt iso ha nọrọ n'oge abalị-
Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mfe ịmata na mbara igwe site na ọdịdị M ma ọ bụ W. A na-eji ya amata ụfọdụ kpakpando mgbe ị na-amụta ihe n’ụwa a.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu gbasara kpakpando na mkpa ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Kpakpando na mbara igwe
Daalụ nke ukwuu maka okwu gị Jose!
DANA, Iche Mbibi n'Oge Dị Elu